राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्न एमाले स्थायी समिति बैठक बस्दै, विद्या, झलनाथ र अष्टलक्ष्मी दौडमा – Setosurya
राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्न एमाले स्थायी समिति बैठक बस्दै, विद्या, झलनाथ र अष्टलक्ष्मी दौडमा
नयाँ राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषय आज टुंगो लाग्दैछ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयनका लागि एमाले स्थायी समितिको बैठक मंगलबार बस्दै छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न ४ बजे बैठक बस्न लागेको हो ।
एमालेमा कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने एकमत छैन । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै दोहो¥याउने पक्षमा छन् । तर, पार्टीकै केही नेता भने पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । २३ सदस्यीय स्थायी समितिमा १० जना भण्डारी र १० जना खनाललाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावल तठस्थ छन् । दुवै अहिलेसम्म कतै खुलेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भोटिङ भए मात्र मत हाल्न पाउने छन् । सबैभन्दा निर्णायक पोजिसनमा नेता नेपाल छन् । यदि उनले चाहे भने खनाल राष्ट्रपति बन्न सक्छन् । तर, १० औं महाधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीभित्र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन पनि गर्नुपर्ने भएकाले नेता नेपालले के निर्णय लिन्छन् ? भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यदि महिलालाई नै राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने हो भने एमाले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । प्रदेश नम्बर ३ को मुख्यमन्त्री नबनाएपछि शाक्य प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग निकै रिसाएकी छन् । उनी एमालेको उपाध्यक्ष पनि हुन् ।
पुरुष राष्ट्रपति भए महिला उपराष्ट्रपति र महिला राष्ट्रपति भए पुरुषलाई उपराष्ट्रपति बनाउने पक्षमा एमाले र माओवादी केन्द्र छन् । माओवादीले वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई नै दोहो¥याउने प्रबल सम्भावना छ ।
नेपाललाई छक्याउँदै ओली (बालुवाटार सम्वादसहित)
राष्ट्रपतिमा विद्यालाई दोहोर्याउने ओली चाहना, खनाल मनाउन यस्तो तयारी
पाँच उपमहानगरसहित १७८ नगरपालिकाका लागि कार्यकारी अधिकृत तोकिए(सूचीसहित)
यसरी विकसित हुदैँछन् दस शहर
दलको मर्यादाक्रम र चुनाव चिन्हबारे महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श
नेपालमा पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण
पूर्ण समानुपातिक प्रणाली नभए भिसीलाई गिरफ्तार गर्ने धम्की
देवी ज्ञवाली भन्छन्ः प्रचण्ड र शेरबहादुरसँगको चुनाव लडाईमा जित मेरै हुन्छ
१५ केजी अवैध सुन बरामद, फेरि पनि चालकमात्रै पक्राउ
ग्वाङजाउबाट एक सातामै केरुङ पुग्यो सामान, पहिला कोलकाता पुग्नै लाग्थ्यो ४० दिन
निर्मला हत्या प्रकरणः यस्ता छन् रहस्यहरू ! कहाँ-कहाँ चुक्यो प्रहरी ?
बाग्लुङ्गमा भिषण सुख्खा पहिरो, खोला थुनियो, स्थानीयबासी त्रसित…(तिन तस्बिरसहित)
पर्वतमा झारफुकको नाउँमा बालिकामाथि दुव्र्यवहार
एकता र मन्त्रालय बाँडफाँडमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति, भोली एकता संयोजन समितिले पूर्णता दिने
एमाले नेताको दाबीः सुन तस्करीमा गृह र अर्थ मन्त्रालयकै संलग्नता छ
पर्वत पुगेर गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री गुरूङले भने – किस्ताबन्दीमा दिने अधिकार मान्य हुँदैन
चुनाव हुन्छ, चुनाव हुँदैन ! नभए के हुन्छ ?
उम्मेद्वारी छनाेटमा एमालेभित्र भाडभैलो, नेपालपक्ष ‘क्लिन स्विप’ !
ओलीलाई फकाउँदै देउबा, यस्तो छ देउवाको भित्री दाउ……………
चर्चित राप्रपा नेत्री कोमल ओली र कांग्रेस खम्वा बलिभद्र राना अब एमालेका नेता !
एमालेले राष्ट्रियताको नाउँमा लोकप्रियता कमाउन खोज्यो-उप प्रम निधि
यस्ताे पनि भएछ कुश्मा नगरपालिकामा, सिधै ९ लाख रूपीयाँ अनियमितता……..
आज घटस्थापना: दशैंको मान्यता र टीकाको साइत यस्तो छ
उल्टियो देउवा सरकारको निर्णय,राष्ट्रियसभामा खतिवडा,बिडारी र राई सिफारिस
गोप्य सुरक्षा बैठक, यस्तो छ : चुनावका लागि गोप्य सुरक्षा रणनीति
अर्को महाअभियोगको तयारीमा एमाले